बिहेमा युवाहरु रक्सि खाएर झगडा गर्दा ओखलढुङ्गामा एक जनाको मृत्यु – Bihani Khabar
Home / News / बिहेमा युवाहरु रक्सि खाएर झगडा गर्दा ओखलढुङ्गामा एक जनाको मृत्यु
बिहेमा युवाहरु रक्सि खाएर झगडा गर्दा ओखलढुङ्गामा एक जनाको मृत्यु
ओखलढुङ्गा । आइतबार राति भएको एक बिवाहको झडपमा परी ओखलढुङ्गामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ कुमार मगरको मृत्यु भएको हो। मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का गंगाबहादुर मगरको बहिनीको विवाहमा मदिरा सेवन गरेका युवाहरु बिच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मदिरा सेवन गरेका शेर्पा समुदायका युवाहरुले मगर परिवारमाथि आक्रमण गरेको स्थानीयबासीले बताएका छन् । घटनामा परी अन्य पाँच जना घाईते भएका छन् ।
एजेन्सी : कहिलेकाँही तपाई सोच्नुहुन्छ होला कि, पिम्पलको समस्याबाट छुटकरा पाउन कुनै सजिलो प्राकृतिक तरिका छैन ? यकीन मान्नुहोस् यस्तो उपाय छ । र यस्तो उपायले पिम्पलको समस्याबाट सधैंका लागि छुट्करा पाउन सकिन्छ । यो उपाय महिला र पुरुषका लागि बराबर उपयुक्त हुन्छ ।
भिजेको हातले अनुहारमा सर्कुलर मोशनमा विस्तारै स्क्रबिङ गर्नुहोस् । कम्तिमा ५ मिनेट स्क्रबिङ गरेर अनुहारलाई नर्मल पानीले धुनुहोस् । एक हप्तामा कम्तिमा दुईपटक यस्तो गर्नुहोस् । नुन एक एन्टी ब्याक्टेरियल प्राकृतिक क्लीन्जर हो । यसले गहिराइमा गएर त्वचाको सफाइ गर्छ । र ब्याक्टेरियाको नाश गर्छ । यस्तै मह प्राकृतिक मस्चराइजर हो । जसले त्वचालाई नरम बनाउनुका साथै त्वचामा निखार पनि ल्याउँछ ।
Previous जिरीमा लाटोकोसेरो उत्सव
Next मनाेज पुनकाे नाम लिँदै सांसदसँग १ कराेड माग, ४ जना पक्राउ
तिब्बती भाषा मात्रै बोल्ने विदेशीलाई कसरी नेपाली नागरिकता? काठमडौंमा कसरी जोडे सम्पत्ति?
धुर्मस सुन्तलीले बनाउने भए ‘नमूना नेपाल’ ललितपुरको लेलेमा
ओलीले रोपेको पिपलमा देउवाले पानी नै हालेनछन् !किक्रिक्क परेको पिपलमा प्रधानमन्त्रीको जलसिञ्चन